पश्चिमाञ्चल होटेल संघको आयोजनामा भएको भाइटिका महोत्सवमा भाइटिका लगाएका पर्यटक । तस्वीरः सुदर्शन रञ्जित । तस्वीरः सुदर्शन रञ्जित/अनलाइनखबर
ओखलढुंगामा जीप दुर्घटना : ७ को मृत्यु, १३ घाइते
९ कात्तिक, ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका ११ स्थित अधेरी नारायणस्थानमा जीप दुर्घटना हुदा ७ जनाको ज्यान भएको छ । निशङ्खेबाट सदरमुकाम ओखलढुंगा तर्फ...
नेपालद्वारा सिंगापुरसामु २६४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत, ज्ञानेन्द्र मल्लको सतक
९ कात्तिक, क्वालालम्पुर । मलेसियामा जारी आइसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन थ्रीको आइतवारको खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई २६४ रनको विजय लक्ष्य दिएको छ । टस...
प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तसँग शीर्षनेताको बैठक
बालुवाटारमा कांग्रेस-एमाओवादीबीच बेग्लै छलफल हुने ९ कात्तिक, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा तीन दलका शीर्षनेताले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग सामुहिक छलफल...
मधेशवादीका नाममा लुटतन्त्र : सभासद आशा यादव
९ कात्तिक, सप्तरी । नेकपा एमाले नेतृ तथा सभासद आशादेवी यादवले मधेशवादी दलहरु मधेशमा साम्प्रदायिक सदभाव बिथोल्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाएकी छन् । घोषिन...
» कम्युनिष्ट नेता भक्तबहादुर पत्नीकाे निधन
» तीन महिनामा आठ अर्ब विदेशी मुद्रा थपियो
» केपी ओलीको देउसे खुसी पार्ने नयाँ तरिका !
» आलु बेचेर विद्यालयमा कोष स्थापना
» कैदीबन्दीलाई सामूहिक भाईटीका
इजिप्टको अस्तित्व खतरामा : राष्ट्रपति सीसी
९ कात्तिक, काठमाडौं । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसीले विदेशी शक्तिको कारण देशको अस्तित्व खतरामा परेको बताएका छन् । टेलिभिजनबाट प्रसारित सन्देशमा सीसीले...
» यो वर्ष धान उत्पादन घट्यो
» आज साँझ हङकङमा इन्फा अवार्ड हुँदै, कलाकारको भब्य स्वागत
» किराना पसलेको गुनासो : गरी खाने वातावरण भएन
» प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामले भने- सहमतिका लागि भूमिका खेल्नोस्
» मोदीलाई ‘कपीराइट’मा कारवाही गर्न सहज छैन
बिजनेस तीन महिनामा आठ अर्ब विदेशी मुद्रा थपियो
९ कात्तिक काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा विदेशी मुद्रामा आठ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप...
साइन रेसुङ्गा बैंकको २२ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत
राैतहटमा ग्यासको सहज आपूर्ति हुन सकेन
यो वर्ष धान उत्पादन घट्यो
मनोरञ्जन पात्रले हिट भएका ‘तक्मे’ र ‘हाकु काले’
सिनेमाको पर्दामा होस् या टेलिभिजनमा नै किन नहोस्, कलाकारहरु विभिन्न भूमिकामा काम गर्छन् । तर, पनि कलाकारले आफ्नै नामको ब्रान्ड बनाउन भने सक्नुपर्छ ।...
साथ खोज्दै सहिमा (भिडियो)
आज साँझ हङकङमा इन्फा अवार्ड हुँदै, कलाकारको भब्य स्वागत
रेकर्ड तोड्दै २ दिनमा ‘ह्याप्पी न्यू इयर’ले कमायो ८५ करोड
‘लज्जा’ र ‘स्टूपिड मन’को तारिफ
बाबुको सिनेमामा ‘झिल्के’ बने छोरा सलोन
कतारमा तमू भाषाको प्रशिक्षण
इन्फा अवार्डका लागि हङकङ पुगेका नेपाली कलाकार । तस्वीरः अनलाइनखबर
मलेसियामा जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ३ मा सिंगापुरविरुद्ध रन लिँदै नेपाली खेलाडी । तस्वीरः अनलाइनखबर
पात्रले हिट भएका ‘तक्मे’ र ‘हाकु काले’
कम्युनिष्ट नेता भक्तबहादुर पत्नीकाे निधन
९ कात्तिक, काठमाडौ । कम्युनिष्ट नेता भक्तबहादुर श्रेष्ठको जीवनसंगिनी रुक्मिणी श्रेष्ठको निधन भएको छ । ७५ वर्षीया रुक्मिणीको मकवानपुरस्थित आफ्नै निवासमा शनिवार विहान निधन...
तीन महिनामा आठ अर्ब विदेशी मुद्रा थपियो
केपी ओलीको देउसे खुसी पार्ने नयाँ तरिका !
९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दलका अध्यक्षको घरमा देउसी खेल्दा देउसेले कति दक्षिणा पाउलान् ? देउसेको स्तर र निकटता हेरेर तलमाथि हुने नै भयो...
आलु बेचेर विद्यालयमा कोष स्थापना
कैदीबन्दीलाई सामूहिक भाईटीका
९ कात्तिक, काठमाडौं । यतिबेला किसानले धमाधम धान थन्क्याइरहेका छन् । तर, देशका विभिन्न स्थानमा समयमै रोपाइँ हुन नसकेका कारण यो वर्ष धान उत्पादनमा...
हङकङ । इन्टरनेसनल नेपाल फिल्म एकेडेमी (इन्फा) अवार्डकालागि नेपाली कलाकारहरु शनिबार बेलुका हङकङ आईपुगेका छन् ।
इन्फा अवार्ड हङकङको युएन लङ थिएटर हलमा आइतबार साँझ...
किराना पसलेको गुनासो : गरी खाने वातावरण भएन
९ असोज, काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएमा लघु तथा साना व्यवसायको विकास हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । समृद्धि फाउन्डेसनले उपत्यकाका किराना...
९ कात्तिक काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा विदेशी मुद्रामा आठ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार ३२ गते बैंकहरुसँग ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप असोज २४ गते ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ...
९ कात्तिक, काठमाडौं । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको २२ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले १० प्रतिशत बोनस सेयर र
९ कात्तिक, रौतहट । रौतहटका विभिन्न बजार क्षेत्रमा एलपी ग्यासको अभाव भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । ग्यासको अभाव भएपछि चन्द्रनिगाहपुरलगायत विभिन्न
९ असोज, काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएमा लघु तथा साना व्यवसायको विकास हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । समृद्धि फाउन्डेसनले उपत्यकाका किराना पसलहरुमा गरेको अध्ययनले लुघ तथा...
छोटो समयमा नै चर्चामा आउन सफल गायिका सहिमा श्रेष्ठले नयाँ एल्बम ‘सहिमाको श्रृङ्गार’मा समावेश ‘तिम्रो साथ पाए भने’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी...
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको साहरुख खानको चलचित्र ‘ह्याप्पी न्यू इयर’ले २ दिनमा ८५ करोडको व्यापार गरेको छ । यो बलिउड सिनेमाको लागि आजसम्मको सवैभन्दा शक्तीशाली...
सिनेमाको पर्दामा होस् या टेलिभिजनमा नै किन नहोस्, कलाकारहरु विभिन्न भूमिकामा काम गर्छन् । तर, पनि कलाकारले आफ्नै नामको ब्रान्ड बनाउन भने सक्नुपर्छ । चलचित्र ‘लुट’मा काम गरेपछि कलाकार सौगात मल्लाई ‘हाकु काले’ नामले...